Rasaas iyo qaraxyo saakay laga maqlayo Dhismaha Ambassador Hotel ee Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Rasaas iyo qaraxyo saakay laga maqlayo Dhismaha Ambassador Hotel ee Magaalada Muqdisho
Rasaas iyo qaraxyo, ayaa waxaa weli laga maqlayaa Dhismaha Hotelka Ambassador, oo gelinkii dambe ee shalay ay weerar qorshaysan ku galeen xubno ka tirsan dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab.
Inta badan Dhismaha Hotelka, ayaa waxaa la wareegay Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano (Alpha Group), iyadoo dagaal-yahanada alshabaab leeskugu geeyay qayb ka ah Dhismaha Hotelkaasi.
Al Shabaab oo la rumeysan yahay in ay xiran yihiin suumanka ka samaysan walxaha qarxa, ayaa waxaa xilliyada qaarkood aaggaasi laga maqlayaa bambooyinka gacanta laga tuuro, oo ay ku caabinayan Ciidamada Dowladda.
Boqolaal ka tirsan Ciidamada Booliska, Nabad Suggida iyo Militariga Somaliya, ayaa waxaa tan iyo xalay lagu arkayaa dhammaan wadooyinka soo gala Ambassador Hotel, si ay kaga hortaggaan gurmad loo soo fidiyo dagaal-yahanada Shabaabka.
Idaacada Andalus oo ku hadasha afka Ururka Al Shabaab, ayaa saakay baahisay in Xoogaga Shabaabka, ay weli hawlgal ka wadaan gudaha Hotelka Ambassador.
Ciidamada Alpha Group, ayaa waxay saacado badani ku qaadatay sidii ay u soo afjari lahaayen raggii weerarka soo qaaday, sababo ku aadan waqtiga oo habeen ku soo beegmay iyo wadooyinka soo gala Hotelka oo aanay xalay ka jirin wax koronto ah.
Xildhibaan Cabdillahi Xaji Dayib ayaa ka sheekeeyey weerarki Hotel Ambassador
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha oo si isku mid ah u cambaareeyey weerarka Hotel Ambassador
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyey in awood-siinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyo heer gobol ah oo loo iib geeyo waxsoosaarka dalkeenna ay kor uqaadeyso dhaqaalaha dalka, fursadaha shaqaaleysiinta dhallinyarada iyo heer nololeedka shacabkeenna.
Madaxweynaha oo warbixin ka dhageystay Wasiirrada Wasaaradaha, Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda Mudane Cabdullahi Bidhaan Warsame, Gaadiidka iyo Duulista Hawada Mudane Durraan Axmed Faarax ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in ganacsiga kala dhexeeya dalkeenna dalalka dariska uu ku saleysan yahay isu dheellitirnaan iyo waxwada qabsi , iyada oo ganacsatada Soomaaliyeed ay helayaan dheef-dhaqaale oo u dhiganta tan dhiggooda badeecadaha keensada dalka.
Maamulaha Shirkadda dhoofisay Kalluunka maanta loo iib geeyey Itoobiya ee qeybta ka ah is-dhaafsiga dhaqaale ee Labada dal Mudane Maxamed Ibraahim Cali (Cajiib) oo kulanka ka qeyb galay ayaa uga mahadceliyey Madaxda dalka mudnaanta ay siinayaan xal u helista caqabadaha ku xeeran ganacsatada Soomaaliyeed oo ay ugu horreyso suuq-geynta heer gobol iyo jaangooynta fursadaha.
Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda Mudane Cabdullahi Bidhaan Warsame iyo Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Mudane Durraan Axmed Faarax ayaa sheegay in fursadaha iskaashiga ganacsi ee dalalka dariska ah ay barbar socdaan dib u dhiska kaabeyaasha dhaqaalaha, isu dheellitirka ganacsiga aan la wadaagno dalalka dariska ah iyo xoojinta wax-soosaarka, taas oo suurta gelinaysa in dalagyada iyo wax-soosaarka dalka ay ka muuqdaan suuqyada dalalka Gobolka.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyey suuqa ganacsi ee u soo kordhay kalluumaysatada Soomaaliyeed, waxa uuna xaqiijiyey in la joogo waqtigii aynu kula tartami lahayn dalalka gobolka waxsoosaarka gudaha dalkeenna.
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa xalay kulan la qaatay Qeybaha kala duwan ee Bulshada Degmada Waajid ee Gobolka Bakool.
Degmada Waajid ee Gobolka Bakool ayaa waxaa ay kamid tahay degmooyinka Gobolkaas ee u go’doonsan Al-Shabaab, waxaana Bulshada ku nool degmadaas heysta dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca Amniga ah .
Guddoomiye -xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Faarax Cabdi Diini iyo xoghayaha guud ee gobolka Banaadir Mudane Xiireey Axmed Rooble ayaa kulan gaar Magaalada Istanbul kula qaatay Madaxweynaha Ururka shaqaalaha Dawladaha hoose ee Turkiga MR. Levent Uslu kulankaas oo diiradda lagu saaray Xaaladda horumarineed ee Muqdisho, marxalidihii kala duwanaa iyo xalligii adkaa ay Magaalada soo martay, waxaa halkaasi laga xusay in ay muhiimad gaar ah leedahay garab istaagga D/Hoose ee Muqdisho si hadafka Maamulka ee adeeg bixinta iyo u adeegidda Shacabka loogu guuleysto.
Ssidoo kale Madaxweynaha Ururka shaqaalaha Dawladaha hoose ee Turkiga Mudane Levent Uslu, oo ay hoos timaado 1400 D.hoose shaqaalaheeda ayaa ballan qaaday arima ay kamid ahaayeen.
isku xirka Dawladda Hoose ee Muqdisho iyo Dawladaha hoose ee kala ah a) Konya b) Bursa
Waxaa isla kulanka lagu ballan qaaday in Waaxda Dab-damiska D. hoose ee Muqdisho laga taageero kor u qaadida xirfadaha iyo aqoonta Saraakiisha iyo hawl-wadeenadda Waaxda.
Waxaa leysla gartay in La xoojiyo xiriirka labada hey’adood ee Muqdisho iyo Midowga shaqaalaha Dawladaha hoose ee Turkiga.
Deg deg in loo diyaariyo heshiis ay kala saxiixan doonaan Maamulka D. hoose ee Muqdisho iyo Midowga Dalwadaha Hoose ee Turkiga.
Madaxweynaha Midowga ayaa sidoo kale ballan qaaday tababradda shaqaalaha D.hoose ee Muqdisho si ay u hantaan hawlaha baaxadda leh ee horyaalla.
Boob Ganacsi oo loo geestay Ganasato Itoobiyaan ah , Iyo walaac soo wajahay Soomalida kunool Dalkaasi .
Ra’iisul WasaarahaDalka oo Xalay Isbitaalka ku booqday dhallinyaro ku dhaawacantay qarax shalay ka dhacay xerada Ciidanka ee Gen.Dhegabadan.
Ciidamo Ka Tirsan AMISOM Oo Lagu Weeraray Shabeelada Hoose.
Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka Oo Ka Warbixiyey Qaraxii Maanta Dhacay.